पाँचखाललाई अर्गानिक नगर बनाउँछौं – Rajdhani Daily
पाँचखाललाई अर्गानिक नगर बनाउँछौं
केशवप्रसाद पाण्डे र केशवराज पौडेल
मेयर, पाँचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलान्चोक
कृषि नगरीका रूपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महŒव राख्ने नगरी पनि हो । नगरपालिकाका मेयर महेश खरेल नगरको समग्र विकासका लागि रातदिन दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताउँछन् । नगरको विकासका लागि सबै नगरवासीको सहयोग र साथ आवश्यक रहने उनको तर्क छ । उनी हाल यस नगरपालिकालाई अर्गानिक कृषि नगरीका रूपमा विकास गर्ने गुरु योजनाका साथ अघि बढिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नगरपालिकाको समग्र विकास योजना, चुनौती र भावी योजनामा केन्द्रित भई राजधानीका केशवप्रसाद पाण्डे र केशवराज पौडेलले मेयर खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नगरपालिकाले नगरवासीको अपेक्षा पूरा हुनेगरी काम गर्न सकेको छ कि छैन ?
हामीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद अधिकतम जनअपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास गरेका छौं । संघीयताको सुरुवाती चरणमा संघ, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा समन्वय गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम बनिरहेको पनि छ । यसबाट भोलिको विकासका लागि बाटो तय गर्ने आधार
निर्माण हुनेछ ।
तीनवटै सरकारका बीचमा द्वन्द्व नहोस् र समन्वयमा काम गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयमा आधारित रहेर काम अघि बढाइरहेका छौं । नगरवासीले प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक ठानेका बाटो र खानेपानीजस्ता अत्यधिक महŒवका आयोजनालाई हामीले पनि प्रमुख महŒवका साथ अघि बढाएका छौं । झन्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ । यसबीचमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार्दै व्यवस्थित नगर बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौं ।
नगरपालिकाका युवालाई रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ लागिपरेका छौं । काठमाडौं नगरपालिका र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सहमति भएर कृषि तथा प्रविधिक क्याम्पस खोल्ने योजनासमेत अघि बढेको छ । हालको अवस्थामा हामीले ५० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छौं । विभिन्न आयोजनाका लागि गर्ने तथा सम्झौता थप गर्ने समयाबधि बाँकी नै भएकाले असार मसान्तसम्म थप ३० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अवस्था छ । बजेटको दुरुपयोग रोक्न र अत्यधिक विकासका काममा लगााउन नगरपालिका प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको छ ।
कृषि नगरका रूपमा परिचित पाँचखालले पछिल्लो समय योे पहिचान गुमाउँदै गएको छ । गुमेको अर्गानिक छविलाई कायम गर्न नगरपालिकासँग के कस्ता योजना छन् ?
कृषि र कुषि उत्पादनकै कारण परिचित बनेको पाँचखालले पछिल्लो समय पुरानो छविलाई कायम गर्न सकेको छैन । वैदिक कालदेखि नै यस क्षेत्रमा कृषि कार्य हुने गरेको विभिन्न ऐतिहासिक समयदेखि नै कृषि कार्य भइरहेको विभिन्न प्रमाण फेला परेका छन् । पाँचखालमा भेटिएको पुरानीको कुवादेखि इँटाका पाइपमार्फत राजकुलोबाट पानी ल्याएको प्रमाण फेला परेका छन् । राजकुलोको पानी झन्डै ५ सय रोपनीमा फैलिएको रानीपोखरीमा जम्मा गरेर कृषिमा उपयोग गर्ने गरेको पत्ता लागिसकेको छ ।
वैदिक कालदेखि कृषिकै कारण पाँचखालले कमाएको प्रख्यातिलाई जोगााउन र गुमेको छविलाई पुनः फर्काउन नगरपालिकाले अत्यधिक विषादीको प्रयोगलाई कम गराउने प्रयास थालिसकेको छ । विषादीका कारण माटोको घटेको उर्वराशक्ति र प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्थामा पाँचखालका कृषि उपजको प्रचार भएका छन् । यसको मर्का आमनगरवासीलाई परेको छ ।
पछिल्लो समय यस्तो अवस्था नरहेको भए तापनि धुमलिएका पाँचखालकोे छविलाई फिर्ता ल्याउन प्रयास थालिएको छ । पाँचखालको ‘अर्गानिक’ पहिचानलाई फिर्ता गर्न नगरपालिकाले २० वर्षे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले दीर्घकालीन योजनामा काम गरिरहेको छ । पाँचखालमा रहेका पानीका मुहान संरक्षणका लागि विज्ञको सल्लाहमा विभिन्न स्थानमा ड्याम बाँधेर पानि जमिनमा रिचार्ज हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नेलगाायतका योजनाबारे समेत छलफल भइरहेको छ । हामी सुकेका पानीका मुहानसमेत पुनः पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्दै छौं । बृहत् सुनकोसी परियोजनासमेतको काम धमाधम भइरहेको छ ।
सम्पदा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले के कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
यो क्षेत्र पलाञ्चोक भगवती रहेको पवित्र भूमि तथा लिच्छविकालीन पुष्टि भएका विभिन्न सम्पदा रहेको क्षेत्र हो । यसका साथै यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक दरबार, पोखरी तथा विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदासमेत रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यसलाई उत्खनन गरी संरक्षण गर्नेतर्फ नगरपालिका लागिपरेको छ । यसको उत्खनन र संरक्षणका लागि नगरपालिकाले पुरातŒव विभागसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ ।
पाँचखालका सम्पदा संरक्षणमा दिलोज्यान दिएर लागिपरेका अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमाललगायतले यसलाई नेतृत्व लिइरहेका छन् । पलाञ्चोक उपत्यकामा उत्खननका क्रममा पत्ता लागेका ऐतिहासिक इँटा सिक्का र अन्य अवशेषहरू नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसलाई नगरपालिकाले स्वामित्व लिई संरक्षण र उत्खननको काम अघि बढाइसकिएको छ । यसबारे आवश्यक कानुन बनिसकेको छ । कानुनअनुसार सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । पाँचखालमा धार्मिक सद्भाव खलल पु¥याउने कुनै गतिविधि अब हुन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, भएका सम्पदाको संरक्षणको क्षेत्रमा नगरपालिकाले योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । धनलक्ष्मीको मन्दिर निर्माण भएको छ, दुग्धेश्वर महादेव, ऐतिहासिक नाम्देश्वर गुफासहितका ३ गुफाको संरक्षण गरी धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिसकिएको छ । ऐतिहासिक पलाञ्चोक भगवतीको नाममा रहेको जग्गाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र संरक्षणको काम भइरहेको छ । मन्दिरको भेटी व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि छलफल सुरु भइसकेको छ ।
जैविक विषादीको उत्पादन तथा उपयोगितालाई जोड दिन थालिएको छ
बिस्तारै सेमिअर्गानिक हु“दै पूर्ण अर्गानिक बनाउ“दै छौं
डिप बोरिºलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दै छौं
इ“टाभट्टा प्रदूषण नियन्त्रणमा कार्यविधि बनाएर लागू गरेका छौं
अवैध इँटाभट्टाका कारण पाँचखालका वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकासँग के कस्ता योजना छन् ?
यस क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषणको प्रमुख कारण मानिएको इँटाभटालाई नियञ्त्रण गर्न नगरपालिकाले कार्यबिधि बनाएर लागु गरेको छ । जनप्रतिनिधि भएर आइसकेको अवस्थामा हामीले कुनै पनि नवीकरणका लागि दिएको निवेदनसमेतलाई हामीले रोक्का गरेका छौं । यसलाई नगरपालिकाले आफ्नै नीति नियम बनाएर नियन्त्रण गर्ने योजना बनिरहेको छ । नगरपरिषद्बाट समेत सर्वसम्म्तले पारित भएको ‘ऐन’बन्ने अन्तिम चरणमा छ । यसलाई अनिवार्य रूपमा मापदण्डअन्तर्गत सञ्चालन गनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कानुन अनुसारका आवश्यक कदम चालिनेछन् । यसबेला पुनः सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, रूख कटान रोक्का गर्नका लागि ‘सेज’ नामक संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
मापदण्डविपरीत उत्खनन गरिएका नदीजन्य उत्पादनको अवैध उत्खनन गरिएका बालुवाखानी बन्द गरिएका छन् । डिप बोरिङलाई नियञ्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि प्राथमिकतामा राखिएकोे छ ।
त्यस्तै, पानी रिचार्ज हुने मौलिक प्रकारका १०८ पोखरी निर्माण भइरहेको छ । वातावरणविद् सन्तोष काफ्लेको नेतृत्वमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।
जसअन्तर्गत नगरपालिकामा नै यूएसएडसँग सहकार्य गरेर सिलिन्डर साटेर इन्डक्सन चुलो साँट्ने योजना राखिएको छ । विभिन्न योजनाका आधारमा पाँचखालको वातावरणलाई जोगाउन र प्रदूषण नियञ्त्रण गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, खेतीयोग्य जमिनको पहिचान र जमिनको खण्डीकरण रोक्न नगरपालिकाको के कस्ता योजना छन् ?
भूउपयोग नीति खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउने नीति हामीले लिएका छौं । यसलाई खेतीयोग्य जमिनमा खेती र घर बनाउन मिल्ने जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रयास थालेका छौं । यसका लागि नगरपालिकाबाट समिति बनाएर सम्भाव्यताबारे अध्ययन थालेका छौं । तत्काललाई प्लटिङको काम रोकेका छौं । खेतीयोग्य क्षेत्र संरक्षण गरेर डाँडाको छेउछाउ तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा बस्ती बनाउन नदिनेगरी नगरपालिकाले योजना बनाएको छ । खानेपानी समस्याको स्थायी समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइरहेका छौं ।
नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाउने बाध्यकारी नियम ल्याएर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नेछ । नगरपालिकामा आएका प्लटिङको योजनासमेतलाई हाल रोक्का राखिएको छ । दीर्घकालीन भिजनका आधारमा मात्र अब यस्ता योजनालाई अघि बढाइनेछ ।
तरकारीमा अत्यधिक विषादी नियन्त्रण गर्न तत्कालका योजना केके छन् ?
सर्वप्रथम त किसानलाई खेती प्रणाली, विषादीको प्रयोग, विकल्पलगायतका विषयमा जनकार बनाउन आईपीएम पाठशाला गठन गरेर नगरपालिकाका सबै वडामा प्रशिक्षण दिइएको छ । यसपश्चात् नगरका विभिन्न १७ स्थानका आलुको नमुना संकलन परीक्षण गर्दा नेपालकै सबैभन्दा कम विषादी भएको पुष्टि भइसकेको छ । हामीले यसै योजनाअनुसार काम गरिरहेका छौं । बिस्तारै यसलाई सेमिअर्गानिक बनाउँदै पुनः अर्गानिक बनाउने योजना छ । यसका लागि हाल नगरपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको छ । जैविक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादन तथा उपयोगितालाई जोड दिन थालिएको छ । जापानी सहयोग नियोग जाइकाको समन्वयमा ५ करोडमा योजना कार्यान्वयनमा भइरहेको छ । साथै अव्यवस्थित रूपमा रहेको बागवानीको जग्गामा अर्गानिक उपजलाई संकलन गरेर त्यसको परीक्षण गरी प्याकिङ गर्ने र राजधानीलगाायतका विभिन्न स्थानमा पठाउन थालिसकिएको छ ।
तपाईंको राजनीतिक सपना र लक्ष्य के छन् ?
म झन्डै १४ वर्षको अमेरिका बसाई त्यागेर देश फर्किएको छु । म जनप्रतिनिधिका रूपमा नगरपालिकामा आएदेखि अन्त्यसम्मको तलब सुविधा लिने छैन । यस अवधिमा कमाएको तलब तथा सुविधाबापतको रकम मैले देखिनेगरी सामाजिक काममा लगाउने योजनामा छु । देशका लागि केही सपना देखेर नै म राजनीतिमा होमिएको छु ।
Tags: पाँचखाललाई अर्गानिक नगर बनाउँछौं